ESI EMEGHARI VIDEO GAA USORO ỌZỌ - ESI MEE - 2019
Esi emeghari video gaa usoro ọzọ
Na eziokwu taa, egwuregwu kọmputa bụ akụkụ dị mkpa nke ndụ nke ọtụtụ ndị ọrụ PC n'otu ọkwa dịka ntụrụndụ ndị ọzọ. N'otu oge ahụ, n'adịghị ka akụkụ ntụrụndụ ndị ọzọ, egwuregwu nwere ọtụtụ ihe iwu chọrọ maka arụmọrụ nke ngwanrọ kọmputa.
Na n'ihu isiokwu ahụ, anyị ga-ekwurịta ihe niile dị mkpa nke ịhọrọ PC maka ntụrụndụ, na-elekwasị anya n'ihe ọ bụla dị mkpa.
Ịgbakọta kọmputa na-egwu egwu
Akpa, ọ dị oké mkpa ịdọrọ uche gị gaa n'eziokwu na n'isiokwu a, anyị ga-ekekọrịta usoro nke ikpokọta kọmputa dịka ụgwọ nke ụfọdụ components. N'okwu a, anyị agaghị atụle mgbakọ ahụ n'ụzọ zuru ezu, ebe ọ bụrụ na ịnweghị nkà kwesịrị ekwesị iji wụnye ma jikọọ ihe ahụ azụtara, ọ ka mma ịghara ịmepụta PC n'onwe gị.
A na-agbakọbara ọnụahịa niile a kpọtụrụ aha n'isiokwu ahụ maka ahịa ndị Russia ma tinye ya na rubles.
Ọ bụrụ na ị na-emeso ndị ọrụ ahụ na-ahọrọ iji laptọọpụ dịka nchọta zuru ezu maka kọmputa nkeonwe, anyị na-eme ọsọ ọsọ na-emechu gị ihu. Laptọọpụ nke oge a abụghị nanị iji kwadebe egwuregwu, ma ọ bụrụ na ha nwere ike iru ihe ndị a chọrọ, mgbe ahụ, ọnụ ahịa ha karịrị nnọọ ọnụahịa nke PC.
Hụkwa: Ịhọrọ n'etiti kọmputa na laptọọpụ
Tupu ị gaa nyochaa nke kọmputa, mara na isiokwu a dị mkpa naanị n'oge ederede ya. Ọ bụ ezie na anyị na-anwa idebe ihe omume ahụ n'ụdị a na-anabata, na-emelite ya, enwere ike inwe ụfọdụ nkwekọrịta n'ihe gbasara mkpa.
Cheta na ihe niile sitere na ntuziaka a dị mkpa. Otú ọ dị, ọbụlagodi, ọ ka nwere ike ịmepụta ihe dị iche iche banyere ihe ndị mejupụtara ya na ọnụ ala ma dị elu, mana ịnwe njikọ mmekọrịta dịka.
Etu ego ruo puku rubles iri ise
Dị ka a pụrụ ịhụ site na aha, akụkụ a nke isiokwu ahụ bu n'uche maka ndị ọrụ ha nke ego ha ji zụta kọmputa na-egwu egwu. N'otu oge ahụ, rịba ama na puku 50 rubles bụ n'ezie kachasị nke kachasị dị mfe, dị ka ike na àgwà nke components ahụ si na mbelata ọnụahịa.
A na-atụ aro ka ịzụta ihe ndị sitere na isi mmalite ndị a tụkwasịrị obi!
N'ọnọdụ dị otú a, ị ga-emepụtara onwe gị nghọta nke dị mfe, ya bụ na ọtụtụ n'ime ego na-ekewa n'etiti ihe ndị bụ isi. Nke a, n'aka nke ya, na-arụ ọrụ na nhazi na vidiyo vidiyo.
Akpa, ị ga-ekpebi ihe nhazi ahụ a zụrụ, na dabere na ya họrọ mpaghara ndị ọzọ nke mgbakọ ahụ. Na nke a, atụmatụ mmefu ego ga-ekwe omume iji kpọkọta PC na-egwu egwu nke dabeere na profaịlụ site n'aka Intel.
Ngwa ndị AMD mepụtara adịghị arụpụta ihe ma nwee ọnụ ala.
Ruo ugbu a, ihe kachasị mma bụ ndị na-eme egwuregwu site na ọgbọ 7 na 8 nke Core - Kaby Lake. Oghere nke ndị na-arụ ọrụ a bụ otu, ma ọnụahịa na arụmọrụ dị iche.
Iji nwee ike izute nnukwu rubles 50,000, ọ kachasị mma ịghara ileghara ụdị ndị na-emepụta ihe site na akara a ma ṅaa ntị na ndị dị ọnụ ala. Obi abụọ adịghị ya, ezigbo nhọrọ maka gị ga-enweta ihe nlereanya nke ọdọ Intel Core i5-7600 Kaby, nke na-eri ihe dị ka puku rubles 14,000 na ihe ndị na-esonụ:
Oge ugboro 3.5 GHz (Ọnọdụ turbo ruo 4.1 GHz).
Site na ịzụta ihe nhazi a, ị nwere ike izute ihe pụrụ iche BOX kit, nke na-agụnye ihe efu ma dị mma nke ngwa nju oyi. N'ọnọdụ ndị dị otú ahụ, nakwa dị ka enweghị usoro ntụrụndụ, ọ kacha mma ịzụta onye ọ bụla nke na-akwado ya. Na njikọ Core i5-7600K, ọ ga-eji amamihe jiri GAMMAXX 300 onye nlekota ala si ụlọ ọrụ China Deepcool.
Akụkụ nke ọzọ bụ ntọala nke kọmputa dum - na motherboard. Ọ dị mkpa ịmara na ndị na-arụ ọrụ ntanetị Kaby Lake na-akwado nke ukwuu nke ndị nne na nna, ma ọ bụghị onye ọ bụla nwere nkwonkwo kwesịrị ekwesị.
Ya mere na n'ọdịnihu, enweghi nsogbu na nkwado nhazi, yana ohere nke nkwalite, ị kwesịrị ịzụta nne na-agba ọsọ na H110 ma ọ bụ H270 chipset, na-atụle ike ego gị. Ụlọ nne na-atụ aro anyị n'ọnọdụ anyị bụ ASRock H110M-DGS na ọnụahịa ala ruru puku 3 rubles.
Mgbe ị na-ahọrọ H110 chipset, ị ga-yikarịrị mkpa imelite BIOS.
Hụkwa: Achọrọ m imelite BIOS
Kaadị vidiyo maka PC ịgba chaa chaa - nke kachasị dị oké ọnụ na nke ukwuu arụmụka nke mgbakọ ahụ. Nke a bụ eziokwu na ndị na-emepụta ihe ngosi nke oge a na-agbanwe ngwa ngwa karịa components ndị ọzọ nke kọmputa ahụ.
N'ịtụ aka na isiokwu dị mkpa, taa ụdị MSI sitere na GeForce bụ akara kaadị kacha mkpa. N'ịtụle mmefu ego na ihe mgbaru ọsọ anyị iji kpọkọta PC dị elu, nhọrọ kachasị mma ga-abụ kaadị MSI GeForce GTX 1050 Ti (1341Mhz), nke a pụrụ ịzụta na ọnụego ruru puku puku 13,000 na ihe ndị na-esonụ:
Ike nchekwa - 4 GB;
Oge nhazi - 1341 MHz;
Oge ncheta bụ 7008 MHz;
Interface - PCI-E 16x 3.0;
DirectX 12 na OpenGL 4.5 nkwado.
Hụkwa: Otu esi họrọ kaadị vidiyo
RAM bụkwa akụkụ dị mkpa nke PC na-egwu egwu, ịzụta nke ị ga-esi na mmefu ego. Na n'ozuzu, ị nwere ike ịme otu ọkwa nke CT4G4DFS824A RAM dị mkpa na nchekwa 4 GB. Otú ọ dị, oge a maka egwuregwu ga-abụ obere, ya mere, ihe kachasị mkpa bụ inye 8 GB nke nchekwa, dịka ọmụmaatụ, Samsung DDR4 2400 DIMM 8GB, na nkezi ọnụahịa nke puku isii.
Ihe na-esote PC, mana nke kachasị mkpa, bụ diski ike. N'okwu a, ị nwere ike ịchọta mmejọ na ọtụtụ ihe ngosi nke akụrụngwa a, mana site na mmefu ego anyị, a gaghị anabata ụzọ a.
Ị nwere ike ịchọta n'ụzọ ọ bụla n'ụzọ ọ bụla ike mbanye site na Western Digital na-echeta 1 TB, ma na ọnụ ala nke elu 4,000 rubles. Dịka ọmụmaatụ, Blue ma ọ bụ Red bụ ụdị akwa.
Ịzụta SSD dabeere naanị n'aka gị na ego gị.
Ike ọkọnọ bụ akụrụngwa kachasị ọhụrụ, ma ọ dịghị ihe dị mkpa karịa, dịka ọmụmaatụ, motherboard. Ihe kachasị mkpa ị kwesịrị ịṅa ntị mgbe ịzụrụ ike ọkụ bụ nnweta nke ọ dịkarịa ala 500 watts nke ike.
Ụdị kachasị mma nwere ike ịbụ ike ọkọnọ Deepcool DA700 700W, na nkezi ọnụahịa ruru 4,000 rubles.
Akụkụ ikpeazụ nke mgbakọ ahụ bụ ikpe PC nke a ga-etinye ihe niile a zụrụ azụ. N'okwu a, ị pụghị ichegbubiga onwe gị ókè banyere ọdịdị ya ma zụta ihe ọ bụla Midi-Tower, dịka ọmụmaatụ, Deepcool Kendomen Red maka puku mmadụ anọ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, mgbakọ a bụ puku puku rubles taa. N'okwu a, arụmọrụ ikpeazụ nke kọmputa dị otú ahụ ga-enye gị ohere igwu egwu egwuregwu ndị a na-achọsi ike na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ntọala kachasị mma n'enweghị enyemaka nke FPS.
Etu ego ruru 100,000 rubles
Ọ bụrụ na ị nwere ihe ruru 100,000 rubles ma dịrị njikere itinye ego na kọmputa ịgba chaa chaa, mgbe ahụ, nhọrọ nke components components dị nnọọ ukwuu, kama ọ bụrụ na ị nwere mgbakọ dị ala. Karịsịa, nke a metụtara ụfọdụ ihe ndị ọzọ.
Nzukọ dị otú a ga-ekwe ka ọ bụghị nanị igwu egwuregwu nke oge a, kamakwa iji rụọ ọrụ na ụfọdụ nghazi ngwanrọ.
Biko mara na ego a ka ị ga-akwụ na PC, ma ọ bụrụ na ọ bụghị naanị egwuregwu ka ị chọrọ, kama ọ bụ PC. Ọ bụ n'ihi nnukwu arụmọrụ na ohere iyi egwu ga-emepe n'emeghị ajọ mbunobi nke FPS na egwuregwu.
N'ịtụle isiokwu nke ịchọta obi maka ihe nhazi PC gị n'ọdịnihu, ị ghaghị ime ndoputa ozugbo na ọbụnadị inwe mmefu ego nke 100,000 rubles enweghi ezi uche n'inweta ọrụ ọgbọ ọhụrụ. Nke a bụ n'ihi eziokwu ahụ bụ Core i7 nwere ọnụahịa dị elu karị, mana ọ bụghị dị ka arụmọrụ dị elu dị ka nke mbụ emetụta Intel Core i5-7600 Kaby Lake.
N'ihe metụtara n'elu, nhọrọ anyị dabara na i5-7600K nlereanya, nke, n'etiti ihe ndị ọzọ, dịka e kwuru na mbụ, nwere ọnọdụ Turbo nwere ike ibuli FPS na egwuregwu kọmputa ọtụtụ ugboro. Ọzọkwa, na nkwonkwo nnabata nke oge a, ị nwere ike iwepụ ọrụ kachasị na ya ma ọ bụrụ na ị naghị etinye oge na ya.
Lee kwa: Otu esi choputa nhazi maka PC
N'adịghị ka nhazi mbụ, ị nwere ike ịzụta usoro siri ike nke CPU dị elu ma dị elu. A ghaghị ịkwụsị nlebara anya kachasị anya n'ụdị Fans ndị na-esonụ dịka ọnụahịa dị elu karịa puku isii rubles:
Ụgwọ onye nlekota ala, nakwa nhọrọ ị ga - ahọrọ, ga - esite n'aka ihe ndị ị chọrọ maka ụda mkpọtụ mepụtara.
Mgbe ị zụrụ nneboard maka mgbakọ dị oke ọnụ nke PC, ịkwesịrị ịhapụ onwe gị ọtụtụ ihe, ebe ọ bụ na ọ ga-abụrịrị na ị ga-emerịrị ike kachasị elu. Ọ bụ maka nke a na ị nwere ike ibubata ụdị nsụgharị niile nke usoro nchekwa Z n'okpuru.
Hụkwa: Otu esi họrọ motherboard
Na-agbakwụnyekwu nkọwa banyere usoro nhọrọ, ihe kachasị ama bụ ASUS ROG MAXIMUS IX HERO nlereanya. Ụdị motherboard dị otú ahụ ga-eri gị 14,100 rubles, mana ị ga-enwe ike inye ihe niile dị mkpa maka onye gamerụ oge:
SLI / CrossFireX nkwado;
4 ohere DDR4;
6 SATA 6 Gb / s slots;
3 oghere PCI-x x16;
14 oghere maka USB.
Ị nwere ike ịchọtakwu nkọwa gbasara ihe nlereanya a n'oge usoro ịzụta.
Kaadị vidiyo maka PC maka 100 rubles ga-abụ nsogbu, dịka o nwere ike ịbụ na mgbakọ dị ọnụ ala. Tụkwasị na nke a, nyere nne na nna ma ọ bụ nhazi ịhọrọ, ị nwere ike ịkọwa ihe kachasị mma.
N'iji ya tụnyere nhọrọ nke otu nhazi ahụ, ọ kacha mma ịzụta kaadị vidiyo site na ọgbọ ọhụrụ GeForce. Onye na-akwado ezigbo ego maka ịzụ bụ GeForce GTX 1070 ndị na-emepụta ihe nkiri, yana ọnụahịa nke puku 50 rubles na ihe ndị na-esonụ:
Ike nchekwa - 8 GB;
Oge nhazi - 1582 MHz;
Oge ncheta bụ 8008 MHz;
DirectX 12 na OpenGL 4.5 nkwado
RAM maka kọmputa ịgba chaa chaa nke nwere mkpa nwere ike ịzụta, na-ele ike nke motherboard. Nhọrọ kacha mma ga-abụ iji 8 GB nke ebe nchekwa na bandwit nke 2133 MHz na ohere nke overclocking.
Ọ bụrụ na ị na-ekwu banyere ụdị ụfọdụ, anyị na-atụ aro ịṅa ntị na HyperX HX421C14FBK2 / 16.
Dịka onye na-ebu data data, ị nwere ike iji Western Blue Blue ma ọ bụ Red na-egosi na ọ bụghị ala karịa 1 TB ma na-efu ihe ruru 4,000 rubles.
I kwesịkwara inweta SSD, nke ị ga-emecha mee ka ịwụnye sistemụ arụmọrụ na ụfọdụ n'ime mmemme kachasị mkpa maka nhazi data. Akwa nlereanya bụ Samsung MZ-75E250BW maka ọnụahịa nke 6 puku.
Akụrụngwa ikpeazụ bụ ike, ego na atụmatụ ya sitere n'aka ike ego gị. Otú ọ dị, ị ga - eji ngwa nwere ike karịa ala 500, dị ka ọmụmaatụ, Cooler Master G550M 550W.
Ịnwere ike ịji sheba kọmputa na nghọta gị, ọ bụrụhaala na enwere ike itinye ihe ndị ahụ n'emeghị nsogbu ọ bụla. Maka mfe, anyị na-akwado ka ị gụọ isiokwu dị mkpa na weebụsaịtị anyị.
Hụkwa: Otu esi họrọ otu ikpe PC
Biko mara na ọnụahịa maka ihe ndị a dị iche iche dịgasị iche iche, ya mere ọnụahịa nke mgbakọ nwere ike ịdị iche. Ma nyere ego, na nke a, ị gaghị enwe nsogbu.
Etu ihe karịrị 100,000 rubles
Maka ndị ahụ na-egwu egwuregwu egwuregwu kọmputa, ego ha karịa atụmatụ nke 100 ma ọ bụ karịa puku rubles, ị pụghị ichebara ihe ndị ahụ echiche ma zụta otu PC zuru ezu. Ụzọ a ga - eme ka ị ghara ịhapụ oge ịzụta, ntinye na omume ndị ọzọ, ma n'otu oge ahụ na-enwe ike imezi n'ọdịnihu.
Ọnụ ego niile nke ihe ndị ahụ nwere ike karịa narị puku abụọ, ebe ọ bụ na nzube bụ isi maka ndị ọrụ bara ọgaranya.
Ịtụle ihe dị n'elu, ọ bụrụ na enwere ọchịchọ, ị nwere ike ikpokọta kọmputa na-egwu egwu site na ịchapụta onwe gị. N'okwu a, dabere na isiokwu a, ịnwere ike ịnakọta otu akụkụ PC kachasị elu taa.
E jiri ya tụnyere mmalite na-eji ego a eme ihe, ị nwere ike ịgbanyere ndị ọkpụkpọ ọhụrụ nke Intel. Karịsịa kwesịrị ịrịba ama bụ Intel isi i9-7960X Skylake nlereanya na nkezi price nke 107 puku na ndị na-esonụ na-egosi:
Frequency 2.8 GHz;
N'ezie, ụda dị ike dị otú ahụ chọrọ usoro dị jụụ dị mma. Dị ka ngwọta, ị nwere ike ịhọrọ site na:
Mmiri jụrụ Deepcool Captain 360 EX;
Cooler Nna-ukwu MasterAir Onye Mere 8.
Ọ bụ gị ka ị ga-ekpebi ihe ga-eme ka ị chọọ, ebe ọ bụ na usoro abụọ ahụ nwere ike ime ka ihe nhazi ahụ họọrọ.
Hụkwa: Otu esi họrọ usoro jụrụ oyi
Nne na nna ga-agbaso ihe niile a chọrọ iji rụọ ọrụ, na-enye ohere ikuku na ntinye nke RAM ugboro ugboro. Nhọrọ dị oke mma maka ego na-adịghị mma maka puku rubles iri atọ ga-abụ motherboard GIGABYTE X299 AORUS Egwuregwu 7:
8 ohere DDR4 DIMM;
8 SATA 6 Gb / s slots;
5 oghere PCI-E x16;
19 oghere maka USB.
A pụkwara ịchọta kaadị vidiyo site na ọgbọ ọhụrụ nke GeForce, ma ụgwọ ya na ikike ya dị iche na ụdị anyị weere na mgbakọ mbụ. N'okwu a, a na-atụ aro ka ị ṅaa ntị na MSI GeForce GTX 1070 Nke ndị na-emeputa ihe ngosi nke ọkụ, nke nwere ọnụahịa 55,000 rubles na àgwà ndị a:
Oge nhazi - 1607 MHz;
Oge nchekwa - 8192 MHz;
DirectX 12 na OpenGL 4.6 nkwado.
RAM na kọmputa site na 100,000 rubles, na-echeba ihe niile dị n'elu, ga-emejupụta akụkụ ndị ọzọ. Nhọrọ kachasị mma bụ iji dobe ọnụ ọgụgụ nchekwa nke 16 GB na 2400 MHz, dịka ọmụmaatụ, ụdị Corsair CMK64GX4M4A2400C16.
Na ọrụ nke diski ike, ị nwere ike iwunye ọtụtụ ngwaọrụ Western Digital Blue na ikike nke 1 TB, ma ọ bụ họrọ otu HDD na ike ị chọrọ.
Tụkwasị na draịvụ ike ị họrọ, a chọrọ SSD, na-ekwe ka kọmputa rụọ ọrụ na ọsọ ọsọ. Ka ị ghara iji oge buru ibu tụlee nhọrọ niile ahụ, anyị na-akwado na-elekwasị anya na Samsung MZ-75E250BW, nke anyị metụrụ na mbụ.
Hụkwa: Ịhazi SSD-ụgbọala
N'ọnọdụ ụfọdụ, ị nwere ike ịzụta ọtụtụ SSDs kpọmkwem maka egwuregwu na mmemme.
Ike ọkọnọ, dị ka ọ dị na mbu, ga-agbaso ihe kachasị mkpa. N'okpuru ọnọdụ anyị, ị nwere ike inyefe ihe nlereanya COUGAR GX800 800W ma ọ bụ Enermax MAXPRO 700W dabara na ike gị.
Na-emecha mgbakọ nke PC kacha elu, ịkwesịrị ịhọrọ ikpe siri ike. Dị ka ọ dị na mbụ, mee nhọrọ gị dabere na akụkụ nke ihe ndị ọzọ na ego gị. Dịka ọmụmaatụ, NZXT S340 Elite Black ga-abụ ezigbo ihe ndabere maka ígwè, ma nke a bụ echiche dị ọcha.
Ngwunye usoro a gwụchara ga-enye gị ohere igwu egwu na ntọala ultra n'egwuregwu niile nke oge a n'enweghị ihe mgbochi ọ bụla. Ọzọkwa, mgbakọ a na-enye gị ohere ịrụ ọtụtụ ọrụ n'otu oge, ma ọ bụ vidiyo na-enye ma ọ bụ na-asọgharị nke ihe egwuregwu dị egwu.
Na nke a na usoro nchịkọta nzukọ zuru oke nwere ike mechaa.
N'okpuru n'isiokwu a, dịka ị nwere ike ịhụ, anyị emetụbeghị ụfọdụ nkọwa ndị ọzọ nke kọmputa kọmputa. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na ihe dị otú ahụ na-adabere na njirimara onwe gị.
Otu esi emeputa ekweisi
Etu esi họrọ ogidi
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị ka nwere nsogbu na ngwaọrụ ngwaọrụ, anyị na-akwado ka ị gụọ ọtụtụ isiokwu na ebe nrụọrụ weebụ anyị.
Hụkwa: Otu esi ahọrọ òké
Na mgbakwunye na nke a, echefula ịṅa ntị na nhọrọ nke nyocha ahụ, ụgwọ nke nwekwara ike imetụta nzukọ ahụ.
Hụkwa: Otu esi họrọ otu nyocha
Dị ka njedebe nke isiokwu a, ịkwesịrị ịme ndoputa na ị nwere ike ịmatakwu ihe ọmụma banyere ịjikọta ihe ndị ahụ na ibe ha, yana nkwenye ha, site na ntuziaka pụrụ iche na akụ anyị. Maka nzube ndị a, ọ kachasị mma iji ụdị ọchụchọ ahụ, ebe ọ bụ na enwere ọnọdụ dị iche.
Ọ bụrụ na ị gụchara ntụziaka ị nwere ajụjụ ọ bụla maọbụ aro, jide n'aka na ị ga-ede banyere ya na ihe ndị ahụ.